Sekuqubuke uvalo kwiSoweto TV kuhaqeka umsebenzi wakhona
KUTHIWA kuqhubeka ngendlela ejwayelekile kwiSoweto TV yize kunothalakale naleli gciwane Isithombe:FACEBOOK
CHARLES KHUZWAYO | June 23, 2020
UMSEBENZI westeshi somphakathi saseGauteng, iSoweto TV, uphuthunyiswe esibhedlela iNasrec eGoli emuva kokutholakala ukuthi usehaqwe yisifo seCovid-19. Ngokuthola kweSolezwe abanye abasebenzi abaneme ngokuthi kuze kube yimanje kusasetshenzwa sengathi akwenzeke lutho.
Kuthiwa lo msebenzi ubhekene nokusetha izinsimbi zokuqopha izinhlelo ezihlukahlukene kulesi siteshi. Esitatimendeni esithunyelelwe abezindaba, abaphathi beSoweto TV basiqinisekisile lesi sigameko esehlele omunye wabasebenzi babo.
"Siyakuqinisekisa ukuthi omunye wabasebenzi kwelinye ihhovisi leSoweto TV utholakale eneCovid-19 ngoLwesithathu lwangoJuni 17. Emuva kwale miphumela, ozakwethu abasebenza eduze kwalo othintekile, bazisiwe futhi bathunyelwa kohlolwa kodokotela. Kulandelwe yonke imigomo yezempilo ukuqinisekisa ukuthi bonke abathintekayo bathola ukunakekelwa ngokwezempilo futhi abanye bekulindeleke ukuba babuye nemiphumela ngoMsombuluko."
Siqhuba isitatimende sithe konke kuqhutshwe ngaphakathi futhi isiteshi silandele yonke imithetho yezempilo ebekwe uhulumeni kazwelonke. Abaphathi bathe bachele indawo yokusebenzela ngemithi yokubulala izinambuzane futhi kwanikezwa bonke abasebenzi izifinyo.